कांग्रेस रूपान्तरणका लागि रामचन्द्र पौडेलले निकाले १० सूत्र « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं, १२ मंसिर : नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेस रूपान्तरणका लागि १० सूत्र सार्वजनिक गरेका छन् । आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा पौडेल, डा. शशांक कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी र डा.रामशरण महतलाई साक्षी राखेर पौडेलले कांग्रेस रुपान्तरणका लागि १० सूत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । पौडेलले कांग्रेस पार्टी विचारशून्य छैन भनेर प्रमाणित गर्दै कम्युनिस्टले छरेका भ्रम र झुटा आश्वासनबाट नेपाली जनतालाई मुक्त गर्नुपर्ने बताएका छन्।
५. आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रुपले पछि पारिएका महिला, दलित, जनजाति र मधेसी तथा विपन्न जनता केन्द्रित नीति र कार्यक्रम अघि सार्दै कांग्रेसलाई प्याडिकल सेन्टरु बाटोमा हिँडाउने ।
विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारलाई तह लगाउँदै देशमा समृद्धि र सुशासन कायम गरौं । निमुखालाई न्याय, विपन्नलाई आय हाम्रो मूल ध्येय हो । राज्यको सम्पति र स्रोतमाथि एउटै वर्ग र तप्काको मात्रै हालिमुहाली भएमा त्यो लोकतन्त्र हुनसक्दैन । स्रोत र अवसरको असमान वितरणले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्छ । मानिसलाई विशुद्ध मानिसको रुपमा हेर्ने सहानुभूतिशील दृष्टिकोण हाम्रो समाजवाद हो । स्वच्छन्दतावादी पुँजीवाद र एकमार्गी साम्यवाद दुवैबाट पृथक छ लोकतान्त्रिक समाजवाद । पहिले सबै बाँचौं अनि प्रतिस्पर्धा गरौं । राज्य अदना जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्दैन । तर, जतासुकै हस्तक्षेप पनि गर्दैन । न्युज कारखाना